Etszọ Kachasị Egwuregwu Ndị Ndị Na-ere Akwụkwọ Na-eweta - 429jp.info
Onye ọ bụla ọhụụ ụwa nke ịkụ nzọ egwuregwu ga-ahụ ngwa ngwa nke oke nhọrọ dị na mberede maka egwuregwu kachasị amasị ha. Tinggba nzọ abịawo ụzọ dị anya n’ime iri afọ ole na ole gara aga, na ịntanetị na-emepụta ọtụtụ nhọrọ maka onye nkwụnye ego ọ bụla, na-enye ya ohere ịchọta ihe dabara na mkpa ya.
Nke a pụtara na e nwere ọtụtụ nzọ dị iche iche ịhọrọ, nke ọ bụla na-enye nke ya, uru na ọghọm ya pụrụ iche. Maka ndị na-ekpori ndụ ịkụ nzọ n’egwuregwu na nke izizi, ndị a bụ ụdị ụdị nzọ dị iche iche nke na-atọkwa ụtọ maka ndị mbido dịka ha bụ maka ndị na-agba agba agba agba.
Ego Nweta Ego
Enwere ike ịchọta akara nkwụnye ego maka ọtụtụ egwuregwu ụwa ma ọ bụrụ na ndị na-akwụ ụgwọ na gburugburu ụwa na-enye ya. N’ebe a, onye nkwụnye ụgwọ ga-etinye ego na otu egwuregwu na-emeri ihe omume ma ọ bụ asọmpi, ma ewezuga obere nkọwa ole na ole ebe a na ebe ahụ, n’ezie na ụdị ego a abụghị nke ukwuu. Ọ bụ n’etiti ndị kasị dịrị nchebe na-enye, ebe ọdịda nke ịgba ọsọ anaghị apụtakarị ịlafu nnukwu ego, mana ọ bụkwa nke nwere ike ịgwụ ngwa ngwa nke ndị nwere ahụmịhe n’okpuru eriri ha. Ka o sina dị, ịkụ nzọ n’ahịrị bụ ezigbo nhọrọ maka onye ọ bụla nke chọrọ itinye obere ego na otu egwuregwu egwuregwu kachasị amasị ha.
Ebe a na-akpọ Accumulator bụ ọtụtụ ndị ga na-eme otu ihe ma a na-eme ha otu mgbe. Ọtụtụ mgbe, ha nwere usoro ịkụ nzọ dị obere karị, nke ọ bụla ewepụtara na otu ihe omume nke so na nnukwu asọmpi. A na-eji ihe nkwụnye ego na-eme ihe maka ndị nwere ahụmahụ ụfọdụ na ụwa ịkụ nzọ egwuregwu, ma nwee ike iduga ụfọdụ nnukwu mmeri, ọ bụrụhaala na ịkụ nzọ na-arụ ọrụ n’usoro ziri ezi. Okwesiri iburu n’uche na ugwo di elu na-abia na ihe ize ndụ di elu, na ihe ndi na-achikota na-adabere na ugwo obula nke oma. Ọ bụrụ na naanị otu onye adaa n’oge oge a, mgbe ahụ a na – akpọ Wager niile ya na onye na – agba mgba nwere ike ịkwụsị idafu ego. Ma ọ bụrụ na, ọ bụrụ na ọ na-egwu nke onye na-agba ya, ọ nwere ike bụrụ nnukwu ụbọchị ịkwụ ụgwọ.
Ntinye ego, nke a makwaara dị ka ihe ọhụụ, bụ ndị a na-ewepụ na ọnọdụ ụfọdụ akọwapụtara n’oge egwuregwu. Ọnọdụ ndị a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla a pụrụ ichetụ n’echiche, nke bụ ihe na-eme ka ha bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ nye ndị mbido mbido. Goodfọdụ ezi ihe atụ gụnyere itinye ego na otu ga-ebu ụzọ nweta ihe mgbaru ọsọ, nke otu ga-ebu ụzọ nweta akara, akara oge nke ihe ga-eme n’oge mmemme, na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere ike imeghari ntanye maka ihe ọ bụla na-eme n’oge egwuregwu ọ bụla, ọ na-emekwa ka ha nwee nzọ ụkwụ zuru oke nke na-eme ka mmadụ niile nọrọ n’oche oche ha na-eche iji hụ ma nzọ ahụ ọ ga-eme nke ọma.